[Nchịkọta Akụkọ] Akpọkuola Ndị Anambra Ka Ha Bataruo Ụlọ n'Oge Ekeresimeesi a
A kpọkuola ụmụafọ steeti Anambra bi n'ebe dị iche iche n'ala Naịjiria na na mba ofesi ka ha lataruo ụlọ ma nọrọ n'obodo ha wee merube mmemme ekeresimeesi a.
Nwunye aka na-achị steeti Anambra, bụ oriakụ Eberechukwu Obianọ kpọrọ oku a n'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ n'Agụlụ, n'okpuru ọchịchị Anaọcha.
Ọ kọwara ekeresimeesi dịka oge e ji enwe añụrị maka ọmụmụ onye nzopụta ụwa bụ Kraịstị, ma kwuo na o kwesiri ka onye ọbụla were oge ahụ cheta ụlọ ebe o si. O mere ka a mara na egwù ọbụla adịghị, n'ihi ezi ọnọdụ nchekwa na udo tọrọ atọ dị na steeti ahụ ugbu a, bụkwa nke e ji ama atụ n'ebe dị iche iche n'ala anyị.
Ọ kpọkuzịrị ndị aka ji akụ na steeti ahụ ka ha doo cheta ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na ndị enweghị ka ọ ha ha, ma nyere ha aka n'oge ekeresimeesi a.